Aadaa: Odaan Oromoo biratti hiika maalii qaba? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Odaa
Uumamsaa galma waan fakkaatuuf bakka seera itti tumatanii fi yaa'iin firaallee itti ba'aniidha. Akkasumas Oromiyaa keessatti hasxaafi faajjiin, alaabaa fi chaappaan Odaa qabu. Faayaan mormaafi harkaa akkasumas uffati aadaa Odaan miidhagu.
Waanuma odaan jiruufi jireenya hawaasa oromoo keessatti bakka guddaa qabuuf ture, baatii muraasaan dura Odoon godina Gujiitti waggaa sadii dura jige ture ka'ee dhaabbachuun lalisu eegaluunsaa oduu guddaa ta'ee kan tureef.
Jaarsoliin/maanguddoon haalaa kana bara milkii ta'u mul'isa jechuu walitti hidhama aadaa waliin qabu ibsuun.
Oromoon Odaa jaallata, bakka guddaas kennaaf. Callisee mukummaa isaatiif osoo hin taane mallattoo inni bakka bu'un, achii-dhuftee aadaafi seenaa Oromoo keessatti qabu guddaadha jedhu qorattoonni seenaa.
Odaan Oromoo biratti yoomirraa jalqabee akka faayidaarra oole qorannoon barreeffamee sirriitti ifa ta'ee dhalootatti darbe hin jiru.
Looret Tsagaayee G/Medihiin garuu waa'ee irreechaafi Odaa barruu Gadaa irratti waggoota hedduun dura akka barreessanitti, ka'umsi Odaa Kushirraa naannoo bara 8,000 Dhaloota Kiristoosiin Dura akka jalqabedha.
'Odaan muka osoo hin taane yaadadha...'
Ayyuun Aadaafi Seenaa dhimma kanarratti dubbifne keessaa tokko Dr. Gammachuu Magarsaati. ''Odaan muka osoo hin taane yaadadha (concept)," jedhu Dr. Gammachuu.
Akka ayyuun kun jedhanitti, bineensis namnis Odaa qabaa. Akkamus muknis Odaa qaba. Kanaaf jedhan, Odaan yaada malee muka qofaa miti kan jedhamuuf. ''Aadaa Oromoo hunda bakka bu'a Odaan" jedhu.
Oromoonis aadaadhumaan Odaan 'Muka abbaa keenyaa jedha'. ''Egaa waan hunda akka mallattootti kan mul'isuu ammoo mukicha Odaati," jedhu.
''Bineensa keessaa leenci, simbira keessaa ammoo risaatii Odaadha. Keessumaa guutuun risaan akka Odaatti ilaalama. Nama keessaammoo qaalluun Odaadha. Garuu qaalluu yeroo jennu warra fagdu jechuu miti, jedhu Dr Gammachuun.
Odaan osoo bokkaan hinroobiin turellee, bishaan malee waggaa lamaa hanga sadiitti turuu danda'a jedhu, Obbo Dirribiin.
Odaan ofumaan galma ta'a
Odaan irra keessa ballatee, lafarra dagaagee deebiyee karaa biraa lafatti gadi dhufa. Kana jechuun, ofumaan mana ta'a, ofumaan galma ta'a jechuudha jedhu.
Akka ayyuun aadaafi seenaa kun jedhanitti, Odaa jalatti aduun nama hingubuu, sagaleen illeen nama hin jeequ. Warri Odaa jalatti mari'atanis sagaleen isaanii alatti hinba'u. Kanaaf, odaan galma aadaa ayyaana qabu kan jedhamuuf jedhu.
Akkasumas "Odaan bakka araaraati. Odaa jala taa'anii gosaafi araari kan taasifamu. Achi jala teesse yoo Waaqa kadhatte siif dhaga'a, ni milkoofta. Seerri achi jala tessee tumattee hojiirra siif oola,'' jedhu Obbo Dirribiin.
Dhimma muka Odaa adda taasisuu keessaa tokko Odaa bakakaan hin dha'u. Kana malees, bineensonni kan akka bofaafi jawwee itti hingalan. Odaatti waantoonni nama rifachiisan hingalan waan ta'eef achi jala bilisaan taa'amee aara galfachuufi araara raawwachuun ni danda'ama, jedhu Obbo Dirribiin.
Walumaagalatti, Oromoon Odaa akka mallattoo araaraa, mallattoo nagaattifi milkiitti ilaala. Kanaafu Odaa jala waraanni hin qubatu jedhu ayyuun kun. Odaa jalatti waanti hamaan hin hojjetamu; Odaa jalatti adabbii du'aa hin dabarfamu, hin raawwatamu.
Odaa meeqatu jira gaaffii jedhuufis, Odaan miliyoonatu jira jedhan Obbo Dirribiin. Odaan kan Oromoon beekamtii kenneef qofatu lakkaa'ama malee hedduutu jira. Fakkeenyaaf, Tuulama keessa Odaa Nabee jira; Arsii keessa Odaa Roobaatu jira; Odaa Bultum Harar keessa jira; Odaan Bisili Macca ira; Odaa Gaarrees Boorana jira; Odaa Mokodii ykn Odaa Gaarradoo ammoo Wallootti argama.
Isaan kun kan beekamtii argataniidha malee Jimma, Wallaggga, Shawaa keessa Odaan jira jedhu, oggeessi kun. Odaa Oromoon jalatti walga'ufi wal araarsu shaniifi ja'a qofa miti. Kun dogogora guddaadhas jedhu.
Oromoon Odaa hinmuru, ni safeeffata. Horiin jala dheeda, namni ammoo jala facaafatee haammata jedhan Obbo Dirribiin.